Dawlad goboleed - Wikipedia
Dawlad-goboleed (; ) waa gobollo dal ka tirsan isla markaana leh xukkun hoosaad kuna dhisan qaabka ah in ay degmooyinka ka kala yimaadaan ergooyin ka kooban siyaasiin iyo odayaal dhaqameedyo ayaa waxay magacaabayaan ergo 100 qof ah waxay dooranayaan 4 qof oo ka socda degmada una gudbaya heer gobol.
Degmooyinka iskugu yimid heerka gobol ayaa waxay la macaamilayaan gobol kale haddii uu ku qanco in ay isku biiraan.
Waxaa jira Soomaaliya in la yiri waa dawlad federaal ah qaabkaasna kuma salaysna waxayna ku salaysanyihiin qaab ay doonayaan dalalka diriska iyo qabiillo gaar ah.
Soomaaliya waxaa ka jira isqabqabsi farabadan iyo faragalin dalalka deriska, waxaa dhismayaasha maamulada gacan saar la leeyihiin dalalka kala ah Itoobiya iyo Kiinya, maamulada hadda dhisan waxaa ka mid ah Somaliland waloow ay sheegato in ay Soomaaliya kala noqotay madax bannaanideedii waxayna kacan saar dhow la leedahay Itoobiya, sidoo kale waxaa jira Puntland oo iyana gacan saar la leh Itoobiya waxayna ahaayeen maamullo hore u dhisnaa inta aan la shaacin Soomaaliya in ay noqotay dawlad federaal ah.
Waxaa jira iyana kuwa ay dabada ka riixayaan Itoobiya iyo Kiinya kuwaasoo ku yaala koofurta Soomaaliya waxaana ka mid ah Maamulka kumeel gaarka ah ee Jubba oo ay Kiinya soo aasaastay, waxaa la sameeyey maamul kale oo isna lagu lagu fogaynayo Jubba, kaasoo loogu magac daray Koonfur galbeed Soomaaliya kaasoo ah lix gobol isla markaana ay qorshaheeda leedahay Itoobiya iyadoo uga gol leh in ONLF aysan fusad u helin hanashada maamulka Jubba ay wado dawladda Kiinya.
Dawladda Soomaaliya, iyaduna waxaa cuuryaamiyey in ay wax ka qabato kala boodka qabiilada iyo faragelinta dalalka deriska ah, wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Goodax Barre ayaa kasoo horjeeda dhammaan qaab dhismeedka maamul goboleedyada ayna ogayn dawladda dhexe .
↑ waraysiga wasiirka arrimaha gudaha uu siiyey Universaltv 04 mar 14
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dawlad_goboleed&oldid=162337"
Last edited on 11 Oktoobar 2016, at 09:41
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Oktoobar 2016, marka ee eheed 09:41.